राज्यलाई आर्थिक भा’र पर्ने भन्दै पछाडि गा’र्ड राखेर राज्यमन्त्री मोटरसाइकलमा सरर.. सम्मान स्वरुप सेयर गरौ ! – Life Nepali
राज्यलाई आर्थिक भा’र पर्ने भन्दै पछाडि गा’र्ड राखेर राज्यमन्त्री मोटरसाइकलमा सरर.. सम्मान स्वरुप सेयर गरौ !
काठमाडौं। देशभरिका ज’नप्रतिनिधिमा गा’डीप्रतिको मो’ह उ’देकलाग्दो छ। नगरपालिकाका प्रमुखदेखि गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षले म’हंगा गाडी चढ्छन्। कतिले त नयाँ गाडी पनि किनेका छन्। प्रदेश २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादव सरकारले दिएको गाडीमा प्राय देखिदैनन्। बरू मोटरसाइकलमा य’ताउति गइरहेको धेरै देखिन्छन्। उनलाई गाडीभन्दा बाइक नै मनपर्छ। बिहान उठेदेखि नै नजिकैका सबै कार्यक्रममा उनी बाइक लिएर निस्किन्छन्।
‘प्रदेशको मन्त्री र समाजवादी युवा सं’घको अध्यक्ष भएका कारण मेरो क्षेत्र धेरै छ। यताउति हिँडिरहनु पर्छ,’ यादवले बाइक चढ्नुको कारणबारे भने, ‘जान आउन सजिलो हुने भएकाले प्राय: म बाइक नै प्रयोग गर्छु।’ उनलाई अन्य मन्त्री सरह राज्यमन्त्री भएको हिसाबले दिइने स’म्पूर्ण सु’विधा दिइएको छ। तर पनि उनको रोजाइको पहिलो सवारी बाइक नै हो। ‘बाइक प्रयोग गर्नुको अर्थ सरकारले मलाई गाडी दिएको छैन, इ’न्धन दिएको छैन भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘कहीँ टाढा वा अन्य जिल्ला जहाँ बाइकमा जान स’म्भव हुन्न त्यहाँ जाँदामात्र सरकारी गाडी प्रयोग गर्छु।’
ठूलो प’दमा पुगेपछि सरकारी स’म्पत्तिमा र’जाइँ गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता नभएकाले स’चिवालयको मोटरसाइकल चढेको यादवले बताए। ‘हिजोसम्म आफ्नो क्षेत्रका जनताको सेवा गरिरहँदा साइकल प्रयोग गर्थें, बाइक प्रयोग गर्थे। यो त्यसैको निरन्तरता हो यो,’ उनले भने। यादव सरकारले दिएको धेरै थोरै से’वा/सुविधाको उ’चित प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। गाडीको अ’नावश्यक प्रयोग गरेर सरकारलाई आर्थिक भार गर्ने र सवारी साधनको दुरुपयोग गर्ने प’रिपाटीमाथिको थोरै मात्रै भए पनि नि’यन्त्रणको प्र’यास पनि आफूले गरेको उनले बताए।
‘आज पो म मन्त्री छु, सधैँधरि मन्त्री भइरहने होइन,’ उनले भने, ‘यसका निम्ति यो सामान्य जीवनयापनको निरन्तर अभ्यास हो। मितव्ययी पनि बनौं न,’ उनले भने।बाइक प्रयोग गर्दा यादवलाई सरकारले दिने मासिक १० लिटर पेट्रोल नै पर्याप्त हुन्छ। यस बाहेक गाडीको लागि मासिक २५० लिटर डिजेल र १० लिटर मोबिल दिइन्छ। ‘जुन गाडी सरकारले दिएको छ, त्यो ख’र्चिलो हो। फा’टफुट्टे का’र्यक्रममा बाइक प्रयोग गर्दा सरकारले दिएको श्रो’त साधनले नै भ्या’उदो रहेछ,’ उनले थपे, ‘हाम्रो काममा धेरै दौ’डधुप हुन्छ।
गाडी मात्रै प्र’योग गरे त कहाँ धान्नु?’ उनलाई प्रदेश २ को स’म्वृद्धि र विकासको स’वालमा आफूजस्ता युवाले एउटा नौलो प्रकारका उ’दाहरणीय बन्नु पर्ने मान्छन्। यसले अ’र्थिक रुपमा मि’तवयी हुने, शुन्य अ’वस्थाको भ्र’ष्टाचार हुने र सम्वृद्धि तथा विकासको हिसाबमा अग्र’गामी हुने उनलाई लाग्छ।-सिधकुराबाट
Previous आफ्नी कुमारी छोरीसँग बिहे गर्नेलाई साढे ३ करोड इनाम दिने एक धनाढ्य-बाबुकाे घोषणा !
Next विधवा आमा डोला अधिकारीका लागि फेसबुकमा योग्य वर खोज्दै छोरा गौरव !